Ịkụ Aka n'Ọnụ Ụzọ Toy
Ngwá Ọrụ Kit
nwa bebi House
New Ngosi plan
Kpụrụ Ngosi foto
ịkụ Aka n'Ọnụ Ụzọ Animal
Ihe: Wood, Plywood
Mbukota: Agba Box
Brand aha: MOOKIDS
MOQ: 1,000 tent
Nzipu: 45 ụbọchị
100% Eco-enyi na enyi ihe
Safety na-abụghị na-egbu egbu elu sere
Biko, ruwe play ụmụaka na-akpali eyen si ọgụgụ isi
OEM iji nabata
Mookids Ụmụaka Co. emi odude ke Ningbo Chian, nke nwere kara ọdịdị mbara ala, na nkwukọrịta.
Anyị ụlọ ọrụ pụrụ iche na ụmụ ji egwuri egwu na nwa ngwaahịa. Anyị na-eso mma ihe ndị dị ka ngwaahịa, ahịa, ahịa
Anyị na-enye na ị bụghị nanị ọzọ nhọrọ na mkpumkpu nnyefe oge, ma na-mma na ngwaahịa na a ezi uche price nakwa
Anyị ji obi anyị na-anabata ka ị gaa na anyị ụlọ ọrụ na www. mookidstoy .com na-atụle azụmahịa, na-atụ anya iwuli elu ogologo okwu azụmahịa mmekọrịta ọ bụla ọzọ
2. nabatara OEM
4. Quality nkwa:
5.Fast & Cheap nzipu
Ndenye ebute Time: Anyị na-raara onwe-eme ka ndị kacha mfe turnaround ugboro na arụsi ọrụ ike iji hụ na gị na deadlines.
Ọ bụla ghara imeri Ahịa: Anyị nọgidere na-agbalịsi ike ịchọta ụzọ nke mbenata anyị mmepụta-akwụ ụgwọ, ụgbọ na-eri, wdg N'ikpeazụ, i nwere ike inwe uru site na ya.
General iji Ama
Anyị nwere obi ụtọ na-enye gị ihe kasị mma ọrụ, ma jiri nlezianya na-elekwasị anya na anyị na. Anyị na-nwetara na-arụ ọrụ na US ahịa, European ahịa na Africa ahịa, Russia ahịa. Ime ebe ọ makwaara na-edu ndú ugboro adabere na kpọmkwem ihe na item quantities ị na-achọ. Ịga nke ọma anyị mgbe niile ka na nghọta nke gị chọrọ na-emekarị nke ngwaahịa na ahịa.
Osote: Cutting Vegetable Set
mara mma Osisi Baby Toy
Laser Bee osisi udi
Adress: Room 2806, Block A, Nke 933 Tiantong Norh Raoad, Yinzhou District, Ningbo China
Ekwentị: +86 574 87628248